Fitantanana orinasa Mamokatra kokoa ny vahiny noho ny Malagasy
Vehivavy mpandraharaha Nofanina momba ny lalàna mifehy ny karama
Nanatanteraka atrikasa lehibe teny Isoraka omaly ny fivondronan’ireo vehivavy mpandraharaha mpitantana orinasa na ny GFEM tarihin-dRazakaboana Fanja.
Harena azo amin`ny tsy ara-dalàna Mitaky fanaraha-maso maro
Napetraky ny filoham-pirenena tamin’ny didy hitsivolana lah. 2019-015 farany teo ny lalàna mahakasika ny fanenjehana na ny famerenana ny harena sy ny tombontsoa azo avy amin’ny tsy ara-dalàna”, hoy Imbiky Herilaza, mpahay lalàna.
Fitantanana maharitra ny harena an-dranomasina Tena ilaina ny voka-pikarohana
Haharitra 2 andro ny famolavolana ny paikady hanangonana ireo voka-pikarohana mahakasika ny harena anaty rano.
Tetikasa Building Bridges “Tafapetraka ny tetezana”
Heritaona lasa izay, tonga teto Madagasikara ny alahady 01 jolay 2018, ny tanora 10 (eo anelanelan`ny 20-35 taona) avy any Mayotte sy La Réunion miaraka amin`ny olon-dehibe telo mpanara-dia.
Fifindramonina arak`asa Mila vaovao marim-pototra avy amin`ireo mpanao gazety
Manana anjara lehibe ny OIT (Organisme International de Travail) eto Madagasikara amin`ny fampahafantarana ny zava-misy marina manoloana ny fifindramonina arak`asa.
Fametraham-bola any amin’ny banky Natao ho an’ny olona manan-katao, fa tsy ho an’ny madinika
Maro tamin’ireo olona nanaovana ny fanadihadiana no tsy manana kaonty na mametraka vola any amin’ny banky.
Iaraha-mahita fa manjaka hatrany ny vahiny eo amin’ny fitantanana ny sehatry ny orinasa tsy miankina, indrindra eto Madagasikara. Hita ho mandroso amin’ny ankapobeny ny orinasa tantanan’izy ireo raha oharina amin’ireo hoentin’ny Malagasy.
Maninona no tsy mahavita isika Malagasy ? Raha eo amin’ny lafiny karama aloha dia latsaka ambany dia ambany ny an’ny Malagasy mihoatra ny vahiny raha samy apetraka eo amin’ny fitantanana. 1500 Euros na 5 749 110 Ariary (1Euro=3832.74Ar) hatramin’ny 10.000 dolara nefa ny tompon’andraikitra Malagasy ambony zara raha tonga 2 000 000 Ar. Amin’izay dia teraka ny fakam-panahy amin’ireo mpitantana ny amin’izay mety ho fangalarana ka mampikorosofahana ny orinasa. Ankoatra izay dia eo ihany koa ny tsy fahaiza-manao, ny tsy fahampian’ny traikefa sy ny fiofanana izay sakana hatrany amin’ny fandrosoan’ny orinasa. Misy aza Malagasy tena tsy manana ny fahaizana manokana amin’ilay sehatra misy no mitantana ilay orinasa, hany ka tsy misy mandeha amin’ny laoniny ny fitantanana. Fa tsy mampandroso ny orinasa tantanin’ny Malagasy ihany koa ny tsy fisian’ny fitsipika mazava sy hentitra ary na misy aza dia goragora ka samy manao ny saim-pantany ny mpiasa. Eo koa moa ny hakamoana mampihena ny famokarana hatrany amin’ny fotony mihitsy izay taratry ny ataon’ny mpitantana. Fa ambonin’izay, hita fa efa tena mafy amin’ny resaka haitarika (leadership) ny mpitantana vahiny ary mahay mandanjalanja tsara ny lafiny maha olona sy ny asa tsy maintsy tanterahan’ny tsirairay